နွယ်​လေးလည်းခံမယ် – CHAR TAKE
23/09/2021char take0 Comments
တင်ဌေးနွယ် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဧည့်သည်များ စည်စည်ကားကား ဖြစ်နေသည်ကို သတိထားမိလိုက်သည် ။ ဖိနပ်ချွတ်တွင် ဖိနပ်လေး ချွတ်ကာ အိမ်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်ရင်း တင်ဌေးနွယ်က အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းထဲရှိ ဆက်တီ ရှိရာသို့ လှမ်းပြီး ကြည့်လိုက်မိသည် ။ ( လာ ညီမလေး….ဒီမှာ မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ် . . .) အမဖြစ်သူ တင်ဌေးသွယ်က သူမကို လှမ်းပြီး ပြောလိုက်စဉ်မှာပင် ဆက်တီမှာ ထိုငနေကြသူ အားလုံးရဲ့ အကြည့်တွေက သူမဆီသို့ ရောက်လာခဲ့ပြီ ။
ထိုသူအားလုံးရဲ့ အကြည့်များသည် သူမထံတွင်စုစည်းကာ ရှိနေစဉ်မှာပင် တင်ဌေးနွယ်က သူမရဲ့ ခြေထောက်ကလေးများကို ညင်သာစွာဖြင့် တလှမ်းချင်းလျောက်လှမ်းကာ ဆက်တီ ရှိရာကို တိုးကပ်သွားခဲ့တော့သည် ။ထိုင်…ညီမလေး တင်ဌေးနွယ်က အမဖြစ်သူရဲ့ အနီးက ကုလားထိုင်တွင် ၀င်ပြီး ထိုင်လိုက်သည် ။ ဟော..ဒါက မမရဲ့ သူငယ်ချင်း ရီရီစန်း….ဒါက သူ့ အမျိုးသား ကိုဟန်ထွန်း . .ဒါကတော့ ကျမရဲ့ ညီမ တင်ဌေးနွယ်ပါ . .သွယ်သွယ်ရဲ့ ညီမလေးက အတော့်ကို ချောတာဘဲ . . ရီရီစန်းရဲ့ မှတ်ချက်ချသံလေး မဆုံးခင်မှာပင် တင်ဌေးနွယ်က သူမရဲ့ မျက်နှာလေးကို ပြုံးကာ ရီရီစန်းကို ကြည့်လိုက်သည် ။
မမ က ပိုပြီး လှပါတယ်နော် . . .ဟင်း..ဟင်း….တင်ဌေးနွယ်ရဲ့ စကား အဆုံးမှာတော့ အားလုံးက တိုးညှင်းစွာဖြင့် ရယ်သွမ်းသွေးလိုက်ကြသည် ။နွယ်နွယ်က ဒီနှစ် ဒုတိယနှစ်လေ ကိုဟန်ထွန်းရဲ့ ဘေးကပ်ရက် ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်နေသော တင်ဌေးနွယ်ရဲ့ ခဲအို တင်ဌေးသွယ်ရဲ့ ခင်ပွန်းကိုနိုင်မင်းက ၀င်ပြီး ပြောလိုက်သည် ။ ဧည့်သည်များ ရှေ့တွင်မို့ တင်ဌေးနွယ်က အသာလေးပင် သူမရဲ့ မျက်နှာကို ပြုံးထားလိုက်ပါသည် ။ စိတ်ထဲကတော့ သိပ်ပြီး မကျေနပ်ပါ ။ ဘာကြောင့်ရယ်တော့ မပြောတတ် ။ဒီလို ညီမလေးရ…အမနဲ့ ရီရီစန်းနဲ့က ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သလို ကိုဟန်ထွန်းနဲ့ ကိုနိုင်မင်းကလည်း သူငယ်ချင်းတွေဘဲ . .အဲဒါ ရီရီစန်းတို့က အခု ဒီကိုဗြုံးစားကြီး ပြန်ပြောင်းလာရတော့ သူတို့ တိုက်ခန်းကလည်း ကိုဟန်ထွန်းရဲ့ ဦးလေး မိသားစုကို တနှစ်စာချုပ်နဲ့ ငှားထားရတာ ဆိုတော့ စာချုပ် ပြည့်ဖို့ကငါးလလောက် လိုသေးတယ်..တစိမ်းတွေ ဆိုရင်လည်း ငွေအမ်းလိုက်ရင် ရပေမယ့် အခုဟာက အမျိုးရင်းတွေ ဆိုတော့ ရီရီစန်းတို့က ဒီမှာ ခဏ လာနေပြီး တိုက်ခန်း အားသွားမှ တိုက်ခန်းကို ပြောင်းဖို့ စီစဉ်မယ်လေ . . .
ဟာ..ဒါဆို ကောင်းတာပေါ့ . .အိမ်မှာက အိမ်အကျယ်ကြီးနဲ့ လူက နည်းနည်းလေး ဖြစ်နေရတာ . .အမတို့ ပြောင်းလာရင် ဒီမှာ ပိုပြီး သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းဖြစ်သွားတာပေါ့ …အမတို့က ဘယ်တော့ ပြောင်းလာမှာလဲ…. ဟင်းဟင်း..အခုဘဲ ပြောင်းလာတာလေ . . ဟော တော့…ဟင်းဟင်း…ဟင်းဟင်း….အဲဒါ ရီရီစန်းတို့ကို ညီမလေးရဲ့ အခန်းဘေးက အခန်းလွတ်မှာ ထားလိုက်တယ်လေဟာ…ကောင်းတာပေါ့..အဲဒီ အခန်းက ကျယ်တယ်… ညီမက အသက် ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ…. ရီရီစန်းရဲ့ ခင်ပွန်း ကိုဟန်ထွန်းက မဆီမဆိုင်သော အကြောင်းအရာကို မေးလိုက်သည် ။အခု ၁၉နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီလေ . . ဖြေလိုက်သူက တင်ဌေးနွယ်ရဲ့ ခဲအို ကိုနိုင်မင်း ဖြစ်သည် ။
ဒီ တခါတွင်တော့ ထိုင်နေကြသူ အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေကို တင်ဌေးနွယ်က သူမရဲ့ မျက်လုံးလေးအား တချက် ဝေ့ကာ ကြည့်လိုက်ပြီးမှ တခြားသူများ မမြင်အောင်ကိုနိုင်မင်းကို နှုတ်ခမ်းလေး စူကာ ပြလိုက်သည် ။ ကိုနိုင်မင်းရဲ့ မျက်နှာက စပ်ဖြဲဖြဲလေး လုပ်ရင်း သူ့ စကားကို ဆက်လိုက်သေးသည် ။နွယ်နွယ်က ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက တိုင်းအဆင့် ကာယ အလှမယ်မှာ ဒုတိယ ရခဲ့သေးတယ်လေ . .ပရိတ်သတ် အားလုံးက နွယ်နွယ်ကို ပထမ တစ်ပေးထားတာ…ပရိတ်သတ်တွေ ထင်တာကတော့ ပထမ ရတဲ့ ကလေးမကို ဒိုင်တွေ မျက်စိမှားသွားလို့တဲ့..ဟင်းဟင်း….ဟုတ်တယ်..သွယ်သွယ့် ညီမလေးကို ကြည့်၇တာ ကိုယ့်ရင်ထဲကို အေးနေတာဘဲ သွယ်ရယ် …..
ရီရီစန်းရဲ့ စကား အဆုံးမှာတော့ တင်ဌေးနွယ်က ထိုင်ရာမှ အသာလေး ထိုက်သည် ။အားလုံးဘဲ ညီမကို ခွင့်ပြုပါဦး . .ခြောက်နာရီကို ကျူရှင် ပြန်တက်ရမှာမို့ပါ… အော်..ဟုတ်လား…အခု ငါးနာရီတောင် ရှိနေပြီဘဲ ..ကဲ..ကဲ…လုပ်စရာ ရှိတာ သွားလုပ်တော့..ရီရီစန်းရဲ့ စကား အဆုံးမှာတော့ တင်ဌေးနွယ်က ပြုံးပြကာ သူတို့ အနီးမှ ထွက်ခွာလာခဲ့တော့သည် ။တင်ဌေးနွယ်က သူမရဲ့ အမ တင်ဌေးသွယ်ရဲ့ ခင်ပွန်း သူမရဲ့ ခဲအို ကိုနိုင်မင်းကို ကြည့်လို့ မရ ဖြစ်နေမိတာ ကြာပြီ ။ သူကသာ ကိုနိုင်မင်းကို ကြည့်လို့ မရဖြစ်နေပေမယ့် ကိုနိုင်မင်းကတော့ သူမကို တော်တော်ပင် ကြည့်လို့ ရနေသည် ။တင်ဌေးနွယ်နဲ့ ကိုနိုင်မင်းတို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့မိကြရင် အနားတွင် အမဖြစ်သူ တင်ဌေးသွယ် ရှိမနေပါက ကိုနိုင်မင်းရဲ့ မျက်လုံးတွေက တင်ဌေးနွယ်ရဲ့ကိုယ်လုံးလေးတခုလုံးကို အရည်ပျော်ကျ မတတ် ကြည့်နေတတ်သည် ။ဒါကိုဘဲ တင်ဌေးနွယ်က ကိုနိုင်မင်းကို မကျေနပ်ဖြစ်ကာ ကြည့်လို့ မရ ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည် ။
ယခု အိမ်တွင် အမရီရီစန်းနဲ့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်း ကိုဟန်ထွန်းတို့ လာရောက်နေထိုင်ကြသည် ဖြစ်လို့ အိမ်မှာ လူအင်အား တောင့်..လူများ လာခဲ့သည်ကို သဘောကျမိခဲ့သည် ။တင်ဌေးနွယ် နဲ့ တင်ဌေးသွယ်တို့ရဲ့ မိဘများသည် နယ်တွင် နေထိုင်လျက် ရှိကြပြီး တင်ဌေးနွယ် ဆယ်တန်းအောင်သည့်နှစ်တွင် ကောလိပ်သို့ ဆက် တက်ရန် အတွက် အမဖြစ်သူရဲ့ အိမ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည် ။ထို သို့ တင်ဌေးနွယ်က အမဖြစ်သူရဲ့ အိမ်သို့ ရောက်ပြီး မကြာမီ အတောအတွင်းမှာပင် သူမက ကိုနိုင်မင်းရဲ့ မျက်လုံးများကို သတိထားမိခဲ့ပြီး ကိုနိုင်မင်းကို ကြည့်လို့မရ ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည် ။
ကိုနိုင်မင်းကို ကြည့်လို့ မရသည့် အထဲတွင် သူ့ရဲ့စပ်ဖြဲဖြဲ မျက်နှာလည်းပါသေးသည် ။တခါတခါစိတ်ဆိုးဆိုးဖြင့် တင်ဌေးနွယ်က ဘာကြောင့်များ ဒီလူကြီးကို မမသွယ်ကယူရတာလဲလို့ တွေးလိုက်မိသေးသည် ။တင်ဌေးနွယ်ရဲ့ အမဖြစ်သူတင်ဌေးသွယ်သည် အသက် ၂၄ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး သူ့ခင်ပွန်းကိုနိုင်မင်းက အသက်၂၈နှစ်လောက် ရှိပြီ ဖြစ်၏ ။ကိုနိုင်မင်းက တင်ဌေးနွယ်ကို မျက်လုံး ကျွတ်ထွက်မတတ် ကြည့်တတ်ခြင်း နဲ့ သူ့မျက်နှာ စပ်ဖြဲဖြဲ လုပ်တတ် နေတတ်ခြင်းတို့သာဆိုး၏ ။ကျန်သောအရာများကတော့ကိုနိုင်မင်းသည် တော်၏ ။ အသောက်အစား ကစားတာ မရှိ ။ အမဖြစ်သူကိုလည်း ကြင်ကြင်နာနာ ရှိ၏ ။ ဒါ့အပြင် တင်ဌေးနွယ်၏ စားရေးသောက်ရေး ကျောင်းစားရ်ိတ် မုန့်ဖိုး တို့အပြင် အ၀တ်အစားများကိုလည်း အလျံအပယ် ၀ယ်ပေးသေး၏ ။ဒါတွေ အပြင် ကိုနိုင်မင်းသည် နယ်က သူမ ၏ မိဘများကိုလိုလေသေး မရှိအောင် ထောက်ပံ့ထားလိုက်သေး၏ ။
ကိုနိုင်မင်းက စေတနာလည်း ကောင်း၏ ။ သဘောလည်း ကောင်း၏ ။ သို့သော် တင်ဌေးနွယ်က သူ့ကို ကြည့်လို့ မရပေ ။သူမတို့ အိမ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာသည့် အမ ရီရီစန်းနှင့် အကို ဟန်ထွန်းတို့ လင်မယားသည်လည်း သူမ၏ အမ တင်ဌေးသွယ်တို့ လင်မယား အသက်လောက်ပင်ရှိ၏ ။ ကိုဟန်ထွန်းကတော့ ကိုနိုင်မင်းလို မဟုတ် ။ အနေတည်၏ ။လူကြီးဆန်သည်လို့ ပြောရမည် ဖြစ်၏ ။ကိုဟန်ထွန်းသည် စကားပြောတက အစ တည်တည်တံ့တံ့ ရှိ၏ ။ပြီးတော့ ကိုဟန်ထွန်းက အသားဖြူဖြူ ဗလကောင်းကောင်း အရပ်မြင့်မြင့် နဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများ သဘောကျသော ပုံစံ မျိုး ဖြစ်၏ ။ကိုဟန်ထွန်းဋ္ဌ ရုပ်ရည်က နှာတန်ပေါ်ပေါ် မျက်ခုံးထူထူ မျက်လုံးရွဲရွဲနှင့်မို့ ခန့်ချော ချောသည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည် ။
ကိုဟန်ထွန်း၏ ဇနီး ရီရီစန်းကလည်း အသားဖြူဖြူ ဒေါင်ကောင်းကောင်းနှင့် ခပ်ချောချော ခပ်တောင့်တောင့် ဖြစ်လို့ သူတို့လင်မယား နှစ်ယောက်သည် ရှေ့သွားနောက်လိုက် ညီသည်ဟု ဆိုနိုင်လေသည် ။ အိမ်သို့ အမ ရီရီစန်းတို့ လင်မယား ရောက်လာကြပြီး နောက်တွင် တင်ဌေးနွယ် တယောက် အိမ် အလုပ်တွေကို ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုတော့ပေ ။ အမ ဖြစ်သူ တင်ဌေးသွယ် နှင့် ရီရီစန်းတို့ နှစ်ယောက်ကသာ ဒိုင်ခံ ဆောင်ရွက်တော့၏ ။ တင်ဌေးနွယ်ကတော့ သူမရဲ့ ကျောင်းစာ တခုထဲကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်လာနိုင်တော့၏ ။ မနက်မိုးလင်းရင် တင်ဌေးသွယ်နှင့် ရီရီစန်းတို့က တယောက်တလဲ ဈေးသွားကာ တယောက်တလဲ ထမင်းချက်၏ ။ မနက်ကိုးနာရီထိုးလျှင် ထမင်းဟင်းက အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီ ။ထမင်းချိုင့် အသီးသီး ထည့်ကြကာ အလုပ်သွားကြတော့၏ ။
တင်ဌေးနွယ်ကတော့ မနက် ၁၀နာရီ လောက်မှ ကျောင်းသို့ သွားရသည် ။ တချို့နေ့များတွင် မနက် ( ၇ ) နာရီလောက် သွားရသည်များလည်း ရှိ၏ ။ဒါပေမယ့် အခု ကျောင်းပိတ်ရက် ဖြစ်လို့ တင်ဌေးနွယ် အိမ်တွင် မြဲနေသည်မှာ ( ၃ ) ရက်ခန့် ရှိနေပြီ ဖြစ်၏ ။ ကျောင်းပိတ်ထားသော်လည်း တင်ဌေးနွယ်ကကျူရှင်ကိုတော့ နေ့စဉ် ညနေတိုင်း သွားနေရ၏ ။ တင်ဌေးနွယ်၏ ကျူရှင်က ညနေ( ၆ ) နာရီမှ ( ၉ ) နာရီ အထိ ဖြစ်ပြီး အိမ်နှင့်လည်း သိပ်ပြီး မဝေးလှသည့်အပြင်အိမ်နီးချင်း အတန်းဖေါ်လည်း ရှိနေလို့တင်ဌေးနွယ်မှာ ညဖက် ကျူရှင်တက်ရသော်လည်း သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေနေ၏ ။တင်ဌေးနွယ်က ကျူရှင်မှ ပြန်လာလျင် မြ၀တီ ရုပ်သံမှ ( ၉ ) နာရီခွဲ ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်လိုက်သေး၏ ။ ရုပ်သံသိမ်းမှ အခန်းတွင်းသို့ ၀င်ကာ စာဖတ်လေ့ ရှိ၏ ။မနက်ပိုင်း ချက်ရေးပြုတ်ရေး တာဝန် မရှိတော့ ညဉ့်နက်အောင် စာဖတ်ပြီး တင်ဌေးနွယ်သည် နေမြင့်အောင် အိပ်လေ့ ရှိ၏ ။
ဒီနေ့ညလည်း တင်ဌေးနွယ် စာဖတ်ပြီးလို့ အိပ်ရာဝင်တော့ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး စာကြည့်စားပွဲပေါ်မှ စားပွဲတင် နာရီလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ည ( ၁၂ ) နာရီ ထိုးရန်( ၁၅ ) မိနစ် လောက်သာ လိုတော့၏ ။စားပွဲတင် နာရီလေးကို ကြည့်ပြီးသည်နှင့် တင်ဌေးနွယ်သည် စာကြည့်စားပွဲရှေ့ ကုလားထိုင်မှ အသာ ထလိုက်၏ ။ ပြီးတော့ အပေါ့အပါးသွားချင်သည့်အတွက်မီးဖိုဆောင်ထဲသို့ ၀င်ကာ အိမ်သာ ရှိရာသို့ သွားလိုက်သည် ။ အပေါ့အပါး သွားလိုက်သည် ။ ပြီးတော့မှ သူမ၏ အိပ်ခန်း ရှိရာကို ပြန်လာခဲ့သည် ။ထိုသို့ သူမရဲ့ အိပ်ခန်းဆီကို ပြန် အလာမှာ သူမရဲ့ အိပ်ခန်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် ရှိသော အမဖြစ်သူတို့ရဲ့ အိပ်ခန်းဆီမှ ထူးဆန်းသော အသံလေးများ ထွက် ပေါ်လာနေသည်ကို သတိပြုမိလိုက်သည် ။
ဒီလို သတိပြု မိလိုက်သည့် ခဏမှာပင် တင်ဌေးနွယ်သည် ဂရုစိုက်ပြီး နားထောင်လိုက်သော အခါတွင်တော့ တစုံတခုကိုသိရှိလို့ သွားရသည့်အခါ သူမ၏ မျက်လုံးလေးများသည် ဝိုင်းလို့သွားကြပြီး သူမ ၏ ကိုယ်လုံးလေးသည်လည်း ကြက်သီးလေးများ ဖျန်းကနဲ ထသွားရသည် ။အသံလေးတွေကို နားစွင့်မိသော တင်ဌေးနွယ်သည် ချက်ချင်းလိုပင် သူမ၏ ခြေထောက်လေးများကို ဖျတ်ကနဲ လှမ်းကာ ခပ်သွက်သွက်လေး သူမ၏ အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ ၀င်ကာ ကုတင်လေးပေါ်က သူမ၏ အိပ်ရာထက်သို့ လှဲချလိုက်ပြီး သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ပက်လက်လှန်ကာ မျက်လုံးလေးများ မှိတ်လို့ ထားလိုက်ရ၏ ။
( ဖွတ်…အင့်….ပြွတ်….အင်း…ပလွတ်….ဟင်းဟင်း…စွပ် ဖတ် …..အာ့ ..အာ့….)တင်ဌေးနွယ် တယောက် မျက်လုံးလေးများ မှိတ်ထားလိုက်သည်နှင့် သူမ၏ နားထဲတွင် စောစောက သူမ ကြားခဲ့ရသော အသံလေးများကို ပြန်လည် ကြားယောင်လာရ၏ ။ထို အသံလေးများကလည်း သူမ၏နားထဲက မထွက်တော့ပေ ။ထူးဆန်းသော အသံလေးများကို ကြားလိုက်ရသည့် တခဏမှာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေး တခုလုံး ကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထသွားခဲ့ရသော တင်ဌေးနွယ်သည် ယခုတဖန် ထိုအသံ လေးများကို ပြန်လည် ကြားယောင်လာရပြန်သော အခါတွင်တော့ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေး တခုလုံးသည် ရှိန်းရှိန်းဖိန်းဖိန်း ဖြစ်လာရတော့သည် ။
သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို အိပ်ရာပေါ်တွင် လူးလူးလှိမ့်လှိမ့်နှင့် ဖြစ်ကာနေပြီး ထို အသံလေးများ ကလည်း သူမရဲ့ နားထဲက မထွက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည် ။ခဏ အကြာတွင်တော့ တင်ဌေးနွယ်သည်သူမ ၏ အိပ်ရာလေးပေါ်မှ လူးလဲ ထလိုက်၏ ။ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် တခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ချလိုက်ပြီးသည့်အလား သူမ၏ ခြေလှမ်းလေးများကို ဖွနင်းကာ သူမ၏ အိပ်ခန်းရှေ့ရှိ သူမ၏ အမ တင်ဌေးသွယ်တို့လင်မယားရဲ့ အိပ်ခန်းဆီသို့ တိုးကပ်သွားခဲ့သည် ။ပြီးတော့ အိပ်ခန်း တံခါးလေးကို သူမ၏ လက်လေးဖြင့် တွန်းလိုက်သောအ ခါ အိပ်ခန်း တံခါးလေးသည် ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ ဟလို့ သွားလေတော့ တင်ဌေး
နွယ်သည် ထို ဟသွားသော တံခါးပေါက်လေးမှ အတွင်းသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်မိတော့သည် ။( အို ) လို့ အသံလေး ကျယ်လောင်စွာ ထွက်သွားမတတ်သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများသည် ဟလို့သွားရ ကာ သူမ၏ မျက်လုံးလေးများသည်လည်း ဝိုင်းစက်လို့ သွားရလေသည် ။အခန်းတွင်းရှိ ကုတင်ကြီး ထက်တွင်တော့ သူမ၏ အမဖြစ်သူ တင်ဌေးသွယ်နဲ့ခဲအိုဖြစ်သူ ကိုနိုင်မင်းတို့သည်နှစ်ယောက်စလုံးအ၀တ် အစားများ မရှိကြဘဲတင်ဌေးသွယ်က ကုတင်ပေါ်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲနေပြီး သူမ၏ ဖင်သားကြီးများကို ကုတင်စောင်းတွင် တင်ထားကာ သူမ၏ ခြေထောက်လေး နှစ်ဖက်ကတော့ကုတင်စောင်းတွင် ကားကားလေး ချထား၏ ။ကိုနိုင်မင်းကတော့ တင်ဌေးသွယ်ရဲ့ ခြေထောက်လေး နှစ်ဖက်ကြားတွင် ကုတင်ဘေး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် မတ်တပ် ရပ်လျက် ရှိ၏ ။
ထို့အပြင် ကိုနိုင်မင်းရဲ့ လီးတန်ကြီးက တင်ဌေးသွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့သွင်းထားကာကိုနိုင်မင်းက သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ရှေ့ တိုးနောက်ငင်လုပ်လျက်တင်ဌေးသွယ်၏ စောက်ပတ်ထဲမှ သူ ၏ လီးတန်ကြီးကို ထုတ်ချီ သွင်းချိ ပြုလုပ်ပေးနေတော့၏ ။တင်ဌေးနွယ်သည် သူမ၏ ရှေ့ ( ၅ ) ပေ မျသာ ကွာဝေးသော နေရာမှ မြင်ကွင်းကို မမှိတ်မသုန် ကြည့်လို့ နေမိသည် ။ဖွတ်. …ပြွတ်….( ပြွတ် . .ပလွတ် . . .)( ပလွတ်…ဖွတ်…)ကိုနိုင်မင်းက အားပါးတရ ဆောင့်ကာလိုးနေသလို တင်ဌေးသွယ်ကလည်းသူမ၏ ဖင်သားကြီးများကို ကြွကာ ကြွကာဖြင့်အားပါးတရ ကော့လို့ ပေးနေ၏ ။( ပြွတ် ပလွတ် . . .)( ပလွတ်…ဖွတ်…)( ဖွတ်. ..ပြွတ် . . .)တင်ဌေးသွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲမှ ထုတ်ကာ ထုတ်ကာဖြင့် လိုးပေးနေသော ကိုနိုင်မင်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ အရည်များဖြင့် စိုရွှဲကာ ပြောင်လက်လို့ နေပြီး
တင်ဌေးသွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ အားမာန်အပြည့်ဖြင့် ဆောင့်လို့ ဆောင့်လို့ ၀င်သွားနေသည်မှာ အားရဖွယ် ကောင်းလှသဖြင့် တွေ့မြင်နေရသောတင်ဌေးနွယ်၏ အာခေါင်လေးသည် တစတစ ခြောက်သွေ့လာခဲ့ပြီး သူမ၏ ကိုယ်ထဲမှအသွေးအသားများမှာ ဆူ ပွက် ထကြွလာကာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးသည်အင်အား ချိနဲ့လို့ လာရတော့၏ ။( ဖွတ်…ပလွတ် …)(ပလွတ် ….ပြွတ်….)( ပြွတ်….ဖွတ် …)( အာ့… ကျွတ်ကျွတ်…ကိုနိုင်ရယ်…..အမလေး…. အင်း..ဟင်း………)( ပြွတ်…ဖွတ်….)( ပလွတ်….ပြွတ်….)( ဖွတ်….ပလွတ် . . .)စောက်ပတ်ကြီးကို အားပါးတရ ကော့ကာ အလိုးခံနေသော အမဖြစ်သူ တင်ဌေးသွယ်၏ ရမက်ထန်စွာ ညည်းလိုက်သံလေးတွေကို ကြားလိုက်ရသော တင်ဌေးနွယ်၏ရင်ထဲတွင် နင့်ကနဲ ဖြစ်သွားရကာ သူမ၏ ထမီေ
အောက်မှ စောက်ပတ်လေးသည်လည်း တင်းကနဲ ဖြစ်လို့ သွားရတော့၏ ။ပြီးတော့ တင်ဌေးနွယ်၏ ခြေဖျား လက်ဖျားလေးများသည် တဖြည်းဖြည်း အေးစက်လို့ လာကာ တဆတ်ဆတ်လည်း တုန်ရင်လာခဲ့ရပြီး သူမ၏ စိတ်ထဲတွင်တော့ သူမကိုယ်တိုင် အလိုးခံနေရသကဲ့သို့ တွေးထင် ခံစား လာရတော့၏ ။( ပလွတ်….ပြွတ်….)( ပြွတ်….ဖွတ်….)( ဖွတ်… ပလွတ် . . )ကုတင်စောင်းနည်းသည် လိုးနေသော လီးတန်ကြီး တချောင်းလုံး ကုန်စင်အောင် ၀င်သည့်အလျောက် ဆှောု ဆောင့် လိုးနေသော ကိုနိုင်မင်း၏ လီးတန်ကြီးသည် တင်ဌေးသွယ်၏ သားအိမ်ဝသို့တိုင် တိုးလို့ တိုးလို့ ၀င်သွားနေရသဖြင့် အလိုးခံနေရသော တင်ဌေးသွယ်သည် ကိုနိုင်မင်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ သူမ၏ ရင်ခေါင်းထဲသို့ တိုးဝင်နေရသလို ခံစားရကာ အရသာတွေ့နေရတော့၏ ။
( ဖွတ်…ပြွတ် . . .)
( ပြွတ်…ပလွတ် . ..)
ကိုနိုင်မင်း၏ လီးတန်ကြီးသည်လည်း ကလေး မမွေးဖူးသေးသော တင်ဌေးသွယ်၏ စောက်ခေါင်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲဝယ် စောက်ပတ် အတွင်းသားလေးများဖြင့် စီးစီးပိုင်ပိုင် ထိတွေ့ကာ အရသာ တွေ့နေရတော့၏ ။
( ပြွတ်….ဖွတ် . . .)
( ဖွတ်…ပလွတ် . . )
တင်ဌေးသွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲကို လိုးပေးနေသော ကိုနိုင်မင်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ တည့်တည့်တမျိုး . .ဘေးစောင်းသို့ တသွယ်..အပေါ်ထောင်ကာ တဖုံ . .အောက်စိုက်ကာ တမျိုး . .မရိုးနိုင်လောက်အောင်ပင် သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ရွှေ့ ပြောင်းကာ အားရပါးရ ဆောင့်ပြီး လိုးနေလေတော့ ကိုနိုင် မင်းရဲ့ လီးတန် ထိပ်ဖူးကြီးက တင်ဌေးသွယ်၏ စောက်ခေါင်းလေးအတွင်းကို နေရာအနှံ့ကို ထိုးတိုက်ကာ ဖိဆောင့် နေလေတော့ တင်ဌေးသွယ် ခမျာ အသားလေးတွေတဆတ်ဆတ် တုန်လို့ သွားကာ အရ သာ တွေ့နေရတော့၏ ။
( ဟင့်…အင့်…ကို….အာ့…….ကိုနိုင်ရယ် . . အမလေး . .ဟင်းဟင်း….ကောင်းလိုက်တာ…ဟင်း..ဟင်း…)
( ဖလွတ် . .ပြွတ် . . .)
( သွယ်….အားရရဲ့လားဟင် . .)
( ပလွတ်….ဖွတ် . . .)
( ကိုရော ကောင်းရဲ့လားဟင် . . .)
( ကောင်းလိုက်တာ …သွယ်ရယ်…ဟင်း . . .)
( ဖွတ်…ပလွတ် . . .)
( ဆောင့်…ဆောင့်လိုက်စမ်းပါ ကိုရယ် . . .အမလေးလေး…ဟင်း….)
( ပလွတ်…ပြွတ် . . .)
( ဖွတ်….ပလွတ် . . )
နှုတ်ခမ်းဖျားလေးများ တဆတ်ဆတ် တုန်လို့နေရသော တင်ဌေးနွယ်သည် သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကိုကိုက်ကာ မာန်တင်းထားပြီး ကိုနိုင်မင်းနဲ့ တင်ဌေးသွယ်တို့နှစ်ယောက်ကို မမှိတ်မသုန် ကြည့်နေရင်းက တင်ဌေးနွယ်၏ ထမီလေးအောက်မှ စောက်ပတ်လေးသည် တင်းမာဖေါင်းကားလို့ လာခဲ့ရပြီး စောက်ရည်များသည်လည်းရွှဲနစ်လာရတော့၏ ။
( ပြွတ်….ဖွတ် . . )
( အာ့…အင်း…ကိုရယ်…ဟင်းဟင်း…သွယ့်နို့တွေကို ဆွဲ… ဆွဲလိုက်စမ်းပါ…ကိုရယ်…ဟင်းဟင်း….)
ကိုနိုင်မင်းက သူ၏ လက်ဖြင့် တင်ဌေးသွယ်၏ နို့ကြီး နှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲကာ ဆုပ်နယ် ဖျစ်ညှစ်ပေးရင်း ဆောင့်လိုးနေတော့၏ ။
( ပလွတ်..ပြွတ် . . )
ခဏ အကြာတွင် အရသာများ အီဆိမ့် လာရသော တင်ဌေးသွယ်သည်သူမ ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ အားပါးတရ လိုးပေးနေသော ကိုနိုင်မင်း ၏ လီးတန်ကြီးကို သူမ၏စောက်ပတ် အတွင်းသားများက တိုးကာဖိကာဖြင့် ဖျစ်ညှစ်ပေးလာတော့ရာ အရသာ အီဆိမ့် လာရသော ကိုနိုင်မင်းသည် သူမ၏ နို့ကြီး နှစ်လုံးကို အားပါးတရ ဆွဲပြီး ဆုပ်နယ်ကာ အားကုန်ထုတ်လို့ ဆောင့်ကာလိုးနေလိုက်တော့၏ ။
( အာ့..အင်း…အမလေး ကိုရယ်…ကျမ ပြီးချင်….အ … အာ့ အား…..အား…အမလေး . .လေး…ကျွတ်ကျွတ်…ကျွတ်…..)တင်ဌေးသွယ်၏ ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံလေးမှာ ကော့ပျံကာ တုန်ခါသွားရသည့် ခဏမှာပင် ကိုနိုင်မင်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးသည်လည်း သူ မ၏ ကိုယ်လုံး ပေါ်သို့မှောက်ရက်သား ကျသွားရတော့၏ ။တံ ခါးဝ မှ တင်ဌေးနွယ်ကတော့ အိပ်ခန်း တံခါးလေးကို အသာ ဆွဲပိတ်လိုက်ကာ နောက်ဖက်သို့ သူမ၏ ခြေထောက်လေးကို ဆုတ်လိုက်ရင်း သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကိုလှည့်ကာ လေးလံသော ခြေလှမ်းများဖြင့် သူမ၏ အိပ်ခန်းဆီသို့ ပြန်လာခဲ့တော့၏ ။
အိပ်ခန်းထဲသို့ ပြန်ရောက်သောအခါ တင်ဌေးနွယ်သည် သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှ ၀တ်ထားသော အကျ င်္ီလေးကို ချွတ်လိုက်လေသည် ။ပြီးတော့ သူမ ၀တ်ထားသော ဘရာစီယာလေးကိုပါ ချွတ်ပြီး ထမီလေးကို ရင်လျားကာ ၀တ်ပြီး သူမ၏ ကုတင်လေး အနီးသို့ တိုးကပ် လာခဲ့၏ ။ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်သို့ တက်ရန် ပြင်လိုက်စဉ်မှာပင် သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တဦးတယောက်က အနောက်မှနေပြီး တင်းကြပ်စွာ ဖက်ကာ ကုတင်လေးပေါ်ရှိအိပ်ယာထက်သို့ ဆွဲလှဲလိုက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတော့၏ ။အလန့်တကြား ဖြစ်သွားရတဲ့ တင်ဌေးနွယ်သည် သူမ ကျောပြင်လေးမှာ အိပ်ယာပေါ်သို့ ကျရောက်သွားသည်နှင့် သူမ၏ မျက်လုံးလေးများက အမောတကောလေးကြည့်လိုက်မိ၏ ။(ဟင်…အကိုထွန်း . .) တင်ဌေးနွယ်၏ စကားလေး အဆုံးတွင်တော့ ကိုဟန်ထွန်း၏ ထူထဲသော နှုတ်ခမ်း အစုံက သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများပေါ်သို့ ဖိကပ်ကာ စုပ်နမ်းလိုက်တော့ရာ ခေါင်း အုံးပေါ်သို့ ရောက်ကာစပင် ရှိသေးသော သူမ၏ ဦးခေါင်းလေးမှာ မြောက်ကနဲ ကြွလို့သွားရပြီး သူမ မျက်နှာလေးမှာ မော့တက်သွားရတော့၏ ။ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို စုပ်ပေးနေသော ကိုဟန်ထွန်းသည် သူ၏ လျာဖြင့် တင်ဌေးနွယ်၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို ယက်လို့ ပေးနေပြန်တော့ တင်ဌေးနွယ်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ လူးလူးလိမ့်လိမ့်လေး လှုပ်ရှား သွားရကာ သူမ၏ ရင်ညွန့်ထက်မှ ထမီစလေးသည် ပြေကျသွားရပြီးသည်နှင့် တဆက်တည်းမှာပင် တင်ဌေးနွယ်၏ လက်ကလေး နှစ်ဖက်သည် ကိုဟန်ထွန်း၏ အကျ င်္ီမပါသော ကိုယ်လုံးကြီးကို ဖက်တွယ် လာရတော့၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် တင်ဌေးနွယ်၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို စုပ်နမ်းနေသော ကိုဟန်ထွန်း၏ လက်တဖက်က ပြေကျနေသော သူမ၏ ထမီလေးကို ဆွဲချလိုက်ပြီးတင်ဌေးနွယ်၏ နို့လေး နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ဆုပ်နယ် ပေးနေတော့၏ ။၀င်းမွတ် တင်းရင်းပြီး ဆူဆူဖြိုးဖြိုးလေး ဖြစ်နေသော တင်ဌေးနွယ်၏ နို့လေးများက ကိုဟန်ထွန်း၏ လက်ကို နူးညံ့အိထွေးကာဖြင့် ထိတွေ့လျက် ရှိတော့ရာတခဏတာမျှသာ ကြာသော အချိန်လေး အတွင်းမှာပင် ကိုဟန်ထွန်းသည် သူ၏ နှုတ်ခမ်းများကို တင်ဌေးနွယ်၏ နှုတ်ခမ်းများဆီမှ ခွာကာ သူမ၏ နို့လေးများဆီသို့သူ၏ မျက်နှာကို အပ်ကာ နို့လေးများကို တလှည့်စီ အားပါးတရ စို့ပေးလိုက်တော့ရာ ကိုဟန်ထွန်း၏ နှုတ်ခမ်းများသည် သူမ၏ နှုတ်ခမ်းများဆီမှ ခွာသွားရသော
တခဏတွင် သူမ၏ လျာလေးကို ထုတ်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးများကို သိမ်းလို့နေသော တင်ဌေးနွယ်သည် သူမ၏ ရင်ဘတ်လေးကို ကော့ကာပေးလိုက်ရတော့၏ ။ကိုဟန်ထွန်း၏ လက်တဖက်ကလည်း သူမ၏ ထမီလေးကို တဖြည်းဖြည်းဆွဲကာ ချနေရင်း ထမီအပေါ်နားလေးသည် သူမ၏ ပေါင်ရင်းဆီသို့ ရောက်လို့အသွားတွင်တော့ သူမက ဖင်ကြွပေးလိုက်ရာ ထမီလေးမှာ ကျွတ်လို့ သွားတော့၏ ။ကိုဟန်ထွန်း၏ လက်က တင်ဌေးနွယ်၏ ၀မ်းဗိုက်သားလေးများကို လျောတိုက်ပြီး ပွတ်ပေးနေတော့ရာ နို့စို့ပေးတာပါ ခံနေရသော တင်ဌေးနွယ်သည် သူမ၏ခြေထောက်လေး နှစ်ဖက်ကို ပူးကာ လိန်ထားပြီး တင်ဌေးနွယ်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ တွန့်လိန်ကော့စောင်းပြီး မချိတင်ကဲလေး ခံစားနေရတော့၏ ။
တင်ဌေးနွယ်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ တွန့်လိန်ကာ ခပ်စောင်းစောင်းလေး ဖြစ်သွားရသော အချိန်တွင် ကိုဟန်ထွန်း၏ လက်တဖက်က သူမ၏ ဖြူဖွေးကားအယ်နေသောဖင်သားကြီးများကို ဆုပ်နယ်ကာ ပေးလိုက်တော့ရာ သူမ၏ ခါးကလေးမှာ ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး ပူးကပ်ကာ လိန်ထားသော တင်ဌေးနွယ်၏ခြေထောက်လေး နှစ်ချောင်းမှာ ကွာဟလို့သွားရတော့၏ ။နို့စို့ပေးနေသော ကိုဟန်ထွန်း၏ လျာလေးကလည်း သူမ၏ နို့သီးခေါင်း နီနီရဲရဲ သေးသေးလေးများကို ဖိဖိပြီးလည်း ယက်ပေးနေသဖြင့် ကိုယ်လုံးလေး တခုလုံး လူးပျံကာ ဖြစ်လို့နေသော တင်ဌေးနွယ် ၏ နှုတ်ခမ်းဖျားလေးမှာ တဆတ်ဆတ် ခုန်ကာ တုန်နေတော့၏ ။
( အင်း…အင်း..အကိုထွန်း . . .အင်း…ဟင်း….) မကြာမီ မှာပင် သူမ၏ လုံးကစ်ကားအယ်နေသော ဖင်သားကြီးများကိုအားပါး တရ ဆုပ်နယ် ဖျစ်ညှစ် ပေးနေသော ကိုဟန်ထွန်း၏ လက်က သူမ၏ ဖင်သားကြီးများကိုဆုပ်နယ်ပေးရသည်ကို အားရလို့ သွားဟန်ဖြင့် ကိုဟန်ထွန်း၏ လက်သည် အမွှေးနက်နက်လေးများ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ပေါက်ကာ ဖြူဝင်း အိဖေါင်းလျက် ရှိသောတင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီးဆီသို့ ရောက်လို့ သွားကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို လက်ဖဝါးဖြင့် အုပ်ကာ ကိုင်လိုက်တော့ရာ တင်ဌေးနွယ်၏ ကိုယ်လုံးလေးသည်တွန့်ကနဲ ဖြစ်လို့သွားကာ သူမ၏ ပေါင်လေး နှစ်ဖက်မှာ ကားလို့ သွားရတော့၏ ။
ပြီးတော့ သူမ၏ ဖေါင်းကားလို့နေသော စောက်ပတ်ကြီးပေါ်တွင် ရွှဲနစ်လို့နေတဲ့ စောက်ရည်များသည်ကိုဟန်ထွန်း၏လက်ကိုတွေ့ထိ ကပ်ညိလို့ သွားတော့၏ ။ကိုဟန်ထွန်းက တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီးကို သူ၏လက်ဖြင့် အုပ်ကာကိုင်ထားလျက်နှဲ့ ဆုပ်လိုက် နယ်လိုက် ဖျစ်ညှစ်လိုက် လုပ်ပေးနေတော့ရာ နို့စို့တာပါ ခံနေရသော တင်ဌေးနွယ်၏ ပေါင်တန်ဖြူဖြူကြီးများသည် စုလိုက်ကားလိုက်ဖြင့် ဖြစ်ကာ အိပ်ရာပေါ်တွင် ထိလို့ထားသော သူမ၏ဖင်သားကြီးများမှာလည်း ရှုံ့လို့ ရှုံ့လို့ သွားရကာ သူမ၏ ခုံးမောက်လွန်းသော စောက်ပတ်ကြီးမှာ ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ ဖြစ်လို့ နေရတော့၏ ။(အင်း…ဟင့်…အင်း… ဟင့် . . . .) ခံစားရ ခက်လို့နေသော တင်ဌေးနွယ်ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးသည် တစတစ ပိုလို့ ပိုလို့ လူးပျံထလာရတော့ရာ ခဏ အကြာတွင်တော့ ကိုဟန်ထွန်းသည် နို့စို့ခြင်းကိုရပ်ကာ ထထိုင်လိုက်ပြီး တင်ဌေးနွယ်၏ ခြေထောက် ဖြူဖြူလေး နှစ်ချောင်းကို သူ၏ လက်ဖြင့် ဆွဲကာမလိုက်သည် ။
သူမ၏ ခြေထောက်လေးများကို ဒူးမှကွေးကာ ထောင်လိုက်ပြီးသူမ ၏ ပေါင်လေးတွေကို ကားပစ်လိုက်၏ ။တင်ဌေးနွယ် ခမျာမှာတော့ ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်ဖြစ်ကာသူမ၏မျက်လုံးလေးများကို မှိတ်လို့ ထားလိုက်၏ ။ ကိုဟန်ထွန်းကတော့ သူ၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံး ကြားကို ရွှေ့ပြောင်းရင်း သူ၏ ပုဆိုးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ကာ သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံး ကြားထဲသို့ အရောက်မှာကိုဟန်ထွန်းသည် ဒူး ထောက်ပြီး ထိုင်လိုက်၏ ။ ပြီးလျင် ကိုဟန်ထွန်းက သူ၏ လီးတန်ကြီး၏ ထိပ်ဖူးကြီးထိပ်နှင့်တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ဝကို တွေ့ထိ ကာ ပေးလိုက်သော အခါတွင်တော့တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ဝရှိ နှုတ်ခမ်းသားလေးများမှာရှုံ့ကနဲ ဖြစ်လို့သွားကာ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးမှာ ဆတ်ကနဲ တုန်ကာ သွားရတော့၏ ။
ကိုဟန်ထွန်းက သူ၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ကို တင်ဌေးနွယ်၏ သောက်ပတ်ဝလေးနှင့် ထိတွေ့ပေးလိုက်ပြီးနောက် သူ၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဖူးထိပ်ကို သူမ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွင်းသို့ အဖျားလေးကို ဖိသွင်းကာ လီးတန်ကြီး၏ ထိပ်ကို သူမ၏ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသား တလျောက် ထက်အောက် စုန်ကာ ဆန်ကာ ပွတ်ပေးနေတော့ တင်ဌေးနွယ်၏ ဖင်သားကြီးမှာ လူးကာ လိမ့်ကာဖြင့် ဖြစ်လျက်နေရှာတော့၏ ။
( အာ့…….အင့်….အကိုထွန်း . . .)
( အင့်…..ဟင်း….အင့် . . . .)
တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသား တလျောက် ထက်အောက် စုန်ဆန်ကာ ပွတ်ပေးနေသော ကိုဟန်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဖူးကြိးက သူမ၏ စောက်စေ့လေးကို ဖိကာဖိကာ ပွတ်လိုက်သော အခါတွင်တော့ တင်ဌေးနွယ်သည် ခံစား၇ခက်စွာဖြင့် သူမ၏ ခါးလေးကို ကော့ကော့ ပေးလိုက်တော့သည် ။ ( အမလေး….အာ့ . . .အင်း…ဟင်း . .ကျွတ်ကျွတ် . . .အကိုထွန်းရယ်…နွယ်လေးကို သနားပါဦး….ဟင့်ဟင့် )ထိုအခါတွင်တော့ရင်ထဲတွင် ဖျင်းကနဲ ဖြစ်သွားရသော ကိုဟန်ထွန်းသည် သူ၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဖူးကို တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ဝတွင် တေ့ကာ ညင်သာစွာဖြင့်လိုးသွင်း လိုက်တော့၏ ။
( ဗျစ် . . ဗျစ်…ဗျစ် . .. .)
( အမေ့….အား….အင့် . .. ..)
တင်ဌေးနွယ်၏ ခါးလေးမှာ ကော့တက်သွားရပြီး ကိုဟန်ထွန်း ဖြည်းဖြည်းလေး သွင်းလိုက်သော လီးတန်ကြီးကတော့ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ တ၀က်ခန့် ၀င်သွားတော့၏ ။ ကိုဟန်ထွန်းက သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ဆက်ပြီး မသွင်းထဲဘဲ သူမ၏ စောက်ပတ်အုံလေးကို သူ၏ လက်မလေး၏ ဇောင်းဖြင့်ဖိကာ ထက်အောက် ပွတ်လို့ ပေးနေတော့ရာ စောက်ရည်များရွှဲနစ်လို့နေသော သူ မ၏ စောက်မွှေးလေးများမှာေ၇ဆွတ်ကာ ဖီးထားသော ဆံပင် မွှေးလေးများကဲ့ သို့တပင်နဲ့ တပင် ကပ်ညိပြီး အချောင်းလိုက်လေးများ ဖြစ်ကာ သွားရတော့၏ ။ ခဏနေတော့မှ ကိုဟန်ထွန်းက သူ၏ လီးတန်ကြီးကို တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ထဲကို ဆက်ပြီး ညင်သာစွာပင် ဖိသွင်းလိုက်တော့၏ ။
( ဗျစ် …ဗျစ် …ဖွတ်….)
ကိုဟန်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ဖွတ်ကနဲ တဆုံး ၀င်သွားချိန်မှာပင် တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်လေးများမှာ ပွက်ကနဲ အန်ကျလာရတော့၏ ။ မာကျောပူနွေးကာနေသော ကိုဟန်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီး အတွေ့ကြောင့် တကိုယ်လုံးရှိ သွေးသားများ ဟုန်းကနဲ ကြွတက်သွားရသော တင်ဌေးနွယ်မှာ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့ပြီး စောက်ပတ်ဝလေးကို ကိုန်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီး အရင်းသို့ အတင်းပင် ပင့်ကာ ကပ်ထားရင်း အဖျားတက်နေသူပမာ တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖြစ်လာပါရတော့၏ ။ကိုဟန်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးမှာလည်း သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ တဆုံး ၀င်ကာ သွားခဲ့ရပြီး ခဏမှာပင် တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ် အတွင်းသား နုနုလေးများက လီးတန် ကို အတင်းပင် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြင့် ရစ်ပတ်ထိတွေ့ လာကြတော့ရာ တရှူးရှူး တရှဲရှဲ ဖြင်က ဖြစ်လို့လာနေရသော ကိုဟန်ထွန်းသည် သူ၏ လီးတန်ကြီးကို တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲမှ ညင်သာစွာဖြင့် လျောကနဲဆွဲထုတ်လိုကကာ စလိုးပေးတော့၏ ။
( အာ့ . . )
တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ် အတွင်းသား နုနုလေးများကို လျောကနဲ လျောကနဲ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ဖြင့် လိုးပေးနေသော လီးတန်ကြီးက သူမ၏စောက်ပတ် အတွင်းသားလေးများကို ဖိဖိစီးစီး ပွတ်တိုက်ကာ သွားနေတော့ရာ တင်ဌေးနွယ်၏ ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေးမှာ တုန်ခါနေရတော့၏ ။
အလိုးခံရင်း အရသာ တွေ့လို့နေရသော တင်ဌေးနွယိသည် စောစောက သူမ ၏ အမဖြစ်သူ အလိုးခံနေသည်ကို သူမ၏ အာရုံထဲမှာ ဖျတ်ကနဲ ပြန်ပြီး တွေ့မြင်လိုက်ရကာ သူမ၏ အမကဲ့သို့ပင် တင်ဌေးနွယ်သည် သူမ၏ ဖြူဖွေး လုံးတစ်ကာ ကားအယ်နေသော ဖင်သားကြီးများကို မြောက်ကြွကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့ပေးရင်း အလိုးခံနေတော့၏ ။( ပလွတ်….ဖွတ် . . .)( ဖွတ်…ပြွတ်…)( ပြွတ်…ပလွတ် ….)
အစက ညင်ညင်သာသာလေးဖြင့်သာ လိုးပေးနေခဲ့သော ကိုဟန်ထွန်းသည်လည်း တင်ဌေးနွယ်၏ အပျိုစောက်ပတ် အသစ်စက်စက်လေး၏ ကျဉ်းမြောင်းလှသော စောက်ခေါင်းလေး၏ နူးညံ့စီးပိုင်လှသော အထိအတွေ့ကြောင့်..တခြာသူများနဲ့ မတူ တမူထူးခြားလှသော တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ် အတွင်းသားလေးများ၏လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြင့် ဆွဲငင်ရစ်ပတ်ပေးနေမှုကြောင့်….အချိုးအစား ကျနလွန်းစွာဖြင့် လှပသော သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးနှင့် ခောမောလှပသော စွဲမက်စရာကောင်းသည့် မျက်နှာလေးတို့ကို တွေ့မြင်ထိတွေ့ ကာ နေရသောကြောင့်..ကိုဟန်ထွန်း၏ ကာမစိတ်များမှာ တစတစ ကြွသထက် ကြွလာပြီး တင်ဌေးနွယ်၏ စောက်ပတ်ကို သူ၏ လီးတန်ကြီးဖြင့် ဖိဖိပြီး ဆောင့်ကာ အားရပါးရ လိုးလိုက်တော့၏ ။ ပြီးပါပြီ ။ crd